iOS 10 ကိုအများသုံး beta သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြနာများ? ဒီမှာဖြေရှင်းချက်ပါ ငါက Mac ကပါ
iOS 10 ကိုအများသုံး beta သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြ?နာများ? ဒီမှာဖြေရှင်းချက်ပါ
အသုံးချ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 13/10/2019 19:14 | လဲ tutorial
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Apple က Worldwide Developers Conference တွင်ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီသည် iOS 10 ၏ပထမဆုံးအများသုံး beta ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အချို့အသုံးပြုသူများသည်ပြproblemsနာများကိုသတင်းပို့ကြသည် သင့်ရဲ့စက်ရုံမှာ။
"ဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမှားယွင်းနေသည်။ iOS 10 Public Beta 1 ကိုဒေါင်းလုပ်ချချို့ယွင်းချက်ရှိသည်"ဤသည်မှာသုံးစွဲသူများစွာသည်သူတို့၏ iPhone နှင့် iPad ထုတ်ကုန်များမှလက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့၊ ၎င်းမှာအဖြေတစ်ခုရှိပြီးအောက်တွင်သင့်အားပြောပြပါလိမ့်မည်။
1 iOS 10 အများဆိုင် beta ၁ တွင် update မအောင်မြင်ပါ
1.1 ပြtheနာ၏အဖြေ: ရွေးစရာ ၁
1.2 ပြtheနာ၏အဖြေ: ရွေးစရာ ၁
iOS 10 အများဆိုင် beta ၁ တွင် update မအောင်မြင်ပါ
သုံးစွဲသူများစွာသည်ဓာတ်ပုံများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ တေးဂီတ၊ သတိပေးချက်များနှင့်အခြားအရာများအားလုံး၏အားသာချက်များကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို iOS 10 beta သို့အဆင့်မြှင့်ရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကပြproblemsနာတွေပိုများလာလေလေပဲ။ iOS 10 Public Beta 1 ကိုရယူရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ၎င်းတို့သည်ယင်းသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှတားဆီးသောအမှားတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသောသုံးစွဲသူများစွာအတွက်ဤအရာသည်အတိအကျဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်မရှည်မှုကကျွန်ုပ်တို့၏ beta ကို install လုပ်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်သော developer beta ကို install လုပ်စေသည်။
ကံကောင်းတာက၊ ပြproblemနာကမဆိုးဘူး၊ ဖြေရှင်းနည်းကိုအောက်မှာပြမယ်။
ပြtheနာ၏အဖြေ: ရွေးစရာ ၁
ကျနော်တို့ကအရိုးရှင်းဆုံးအခြေအနေကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည် iOS 10 ၏ပထမဆုံး beta version ကို install မလုပ်ပါက developer များသာရည်ရွယ်သည်ပြtheနာမှာ software ၏အမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုကြောင့် software ကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ် ချ၍ မရပါ။ ဤကိစ္စတွင်သင်လုပ်ရန်မှာဤအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
Settings အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ General → Storage & iCloud → Manage Storage သို့သွားပါ။
iOS 10 အများဆိုင် beta 1 ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်ထားသင့်သည်။ ဒါကိုဖျက်ပါ။
ဒါဆိုသင့် iPhone ဒါမှမဟုတ် iPad ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ။
Settings> General → Software update သို့သွားပါ။
ဒုတိယဖြစ်ရပ် သင်ယခင်က iOS 10 developer beta ကို install လုပ်ခဲ့လျှင်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တပ်ဆင်မှုနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောကြောင့်ယခင် install လုပ်ထားသော profile ကိုဖျက်ပစ်ရမည်။
သင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ရှိချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုပါ။
မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေနားတွင်တွေ့နိုင်သည့် General route → Profile နှင့် device management ကိုလိုက်နာပါ။
ယခု "iOS Beta" profiles အားလုံးကိုဖယ်ရှားပါ သင် install လုပ်ထားသော iOS 10 အများဆိုင် beta-profile (အမှားများကိုရှောင်နိုင်လိမ့်မည်) ။
Settings အက်ပ်သို့ပြန်သွားပြီး General → Storage & iCloud → Manage Storage သို့သွားပါ။
iOS 10 အများဆိုင် beta 1 ဆော့ဖ်ဝဲရှိလျှင်၎င်းကိုဖယ်ရှားပါ။
Home နှင့် Wake / Sleep ခလုတ်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖိ၍ သင်၏ကိရိယာကိုပြန်လည်စတင်ပါ။ ပန်းပွင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခလုတ်နှစ်ခုလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ iOS 10 public beta profile ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ပြီး Safari browser ကို သုံး၍ Apple စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြား Safari ကိုမသုံးပါနဲ့။
ပရိုဖိုင်းကိုသင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ပေါ်တွင်သင်အရင်ကဲ့သို့လုပ်ထားပါ။
ကိရိယာပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် Settings → General → Software update ကိုသွားပါ။
ဆော့ဖ်ဝဲ update ကိုနောက်တဖန်ရရှိနိုင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထပ်ထည့်သွင်းပါ။
အထက်ဖော်ပြပါညွှန်ကြားချက်များကိုသင်လိုက်နာခဲ့လျှင်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်နှင့် iPod Touch တို့ရှိ iOS 10 Public Beta 1 မှသတင်းအားလုံးကိုခံစားရမည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်တရားဝင်ပြthereနာမျှရှိပုံမပေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် developer များအတွက်သီးသန့်ဖြစ်သောပရိုဖိုင်းနှင့်မူကွဲကို install လုပ်ခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်သွားခဲ့ပြီ၊ အများပြည်သူ beta ဗားရှင်းကို update ။
အဲဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ iOS 10 အများဆိုင် beta သည်စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်ရှိနေသောကြောင့်အချို့ application များသည်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » iOS 10 ကိုအများသုံး beta သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြ?နာများ? ဒီမှာဖြေရှင်းချက်ပါ
Silverlock Password Manager & Secure Digital Wallet သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်
iPhone ရောင်းအားကျဆင်းနေ ဦး မလား။